Pakuchenesa midziyo yehotera, nyanzvi yekuchenesa hotera inofanirwa kushandiswa. Iyo midziyo muhotera ichave nemamakisi akasiyana nekuda kweakasiyana nyeredzi hotera ratings. Zvisinei, zvimwe zvinodiwa zvichiri zvakafanana pakuchenesa. Ngatitarisei pane kusanzwisisana kunofanirwa kudzivirirwa kana uchishandisa vanochenesa mahotera kuchenesa sofa remakona razvino. 1. Usashandise zvakawandisa…
Chetatu chenguva yakashandiswa pamubhedha, iyo tsika yechirimo uye yekuyeuchidza furo matiresi yakakosha. Iyo inogona kuvandudza hunhu hwemunhu hwekurara, uye nebasa rekuchengetedza hutano kumuviri wemunhu, pane kudaro, kana kutenga isingakodzeri yavo metiresi kunogona kurega munhu achiwedzera kurara zvakanyanya kuneta, tsandanyama dzemuviri hadzigoni kuwana…
Kuchengetwa kwemamatiresi kwagara kuri nyaya ingave yevashandisi venguva dzose, vaparidzi, kana vatengesi. Kubva pane yakareba gore rekugadzira ruzivo, pane mamwe matipi ekugovana newe. Izvi zvinofanirwa kuita kuti mateti yako igare kwenguva yakareba. Mazano evatengi veOEM 1. Kuchengetedza humidity Iyo yekuchengetedza nharaunda inofanirwa kunge iri mune zvine musoro mamiriro kuti idzivise muforoma…
Pakati pematiresi mazhinji, machira akasimba ane akawandisa e 3500 matsime. Kazhinji mamwe matsime anowanikwa mune akasimba orthopedic mattresses sezvazvaive. Homwe yechirimo metiresi hunyanzvi hwave kunyatso kuzivikanwa sezvo zvakakurudzira kugadzirwa kwehomwe chitubu machira. Zvakaonekwa kuti matiresi aya, ipa nyaradzo inoshamisa nenzira yematsime ega ega. Sezvo zvichitevera…
Ndinoziva vanhu vazhinji vanogona kunge vachinzwa kusazeza kutenga sofa. Naizvozvo, inobatsira kubva kumakore marefu ekugadzirwa mundima yemidziyo, isu tinokwanisa kugovana vese vatengi vedu pamwe pazasi pasofa kutenga matipi. 1. Tarisa iyo Fit Hapana hunyanzvi mukufunga chigaro cherudo pamukana wekuti hau…